I-studio sesimanje esinokuthula sasepulazini Iwusizo edolobheni - I-Airbnb
I-studio sesimanje esinokuthula sasepulazini Iwusizo edolobheni
Fernside, Canterbury, i-New Zealand
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Elaine
I-Fernside Rangiora Modern enendawo evulekile eneshawa enamakamelo okulala angu-2 kanye nendlu yangasese Iqhelelene nendlu eyinhloko. Isethingi enhle yasemaphandleni enokuthula ekuphileni kuvimba amaminithi angu-30 enyakatho yesikhumulo sezindiza sase-Christchurch International
Ukugijima edolobheni kuqhele ngo-5kms nokufinyelela okulula kokuthenga, izindawo zokudlela & amabhayisikobho.
I & 1/2 hrs to Hamner Springs, 1 hr to Porters pass ski field. Eduze namabhishi i-Waikuku, i-Woodend, i-Pegasus Bay, nomfula i-Waimakariri wokubhukuda nokudoba ngesikebhe
I-Studio sinamaqhwa amabili. Inomshini wokushisisa ongasebenzi/i-air conditioner, uhlelo lwe-HRV (uhlelo lokuvuselela umoya) I-Smart TV ene-Netflix, i-Wifi yamahhala, ikhishi elinetafula nezihlalo, ifriji, i-microwave, i-toaster, iketela, izinto zokudlela kanye ne-crockery. Isidlo sasekuseni samahhala, i-gluten mahhala uma kucelwa, amathawula ahlanzekile ashintshiwe nsuku zonke, ingubo kagesi yalezo zinsuku ezibandayo zasebusika. Ikamelo lineminyango yase-France evulekela kuvulande onetafula nezihlalo phakathi kwaso ayinayo ingadi enezici zokuhlobisa.
4.98 · 213 okushiwo abanye
I-Fernside yimizuzu engu-5 ukusuka edolobheni lase- Rangiora ngemoto namathilomu endawo, ishashalazi lemuvi, izindawo zokudlela, izimakethe ezinkulu, indawo yokubhukuda yangaphakathi, indawo yokudlala igalofu kanye namakilabhu e-bowling. Iseduze ne-Christchurch futhi ibanga elilula lokushayela uhambo losuku oluya e-Hamner, e-Kaikoura, e-Terrace Downs Golf Club, e-Timaru Oamaru nase-Methven.
Sijabule kakhulu ngokuba nokuxhumana nezivakashi uma kudingeka. Noma kunjalo, u- uzohlonipha ubumfihlo bakho. Uma ufuna okokuzithokozisa kokuhlala epulazini ungasiza ukondla izinyosi noma uqaphele izinyosi uma ufuna. Ukunambitha ubusi kwamahhala kuyahlinzekwa. Ungazisiza futhi kuma-cranberries, atholakalayo ngo-February nango-March. Zikhula ngaphandle nje komnyango wakho wangaphambili.
Sijabule kakhulu ngokuba nokuxhumana nezivakashi uma kudingeka. Noma kunjalo, u- uzohlonipha ubumfihlo bakho. Uma ufuna okokuzithokozisa kokuhlala epulazini ungasiza ukondla izinyo…